”मैलै समाज परिवर्तन गरेको छु” हट एन सेक्सी ज्योती मगर यसरी भन्छिन् – Complete Nepali News Portal
May 27, 2017	267 Views
मोटी, गोरी अनि हँसिलो अनुहार भएकी ज्योती मगरलाई नेपाली लोक दोहोरीमा भल्गारिटि भित्र्याउने गायिका भन्ने गरिन्छ । एक दशकदेखि लोकगीत संगीतमा सक्रिय उनले एक सय भन्दा धेरै लोक दोहोरी गीतमा आवाज दिईसकेकी छिन् । ज्योती राम्रो गायकी भन्दा पनि उत्श्रृङखलतालाई प्राथमिकता दिने गायिकामा पर्छिन् ।
रोल्पाबाट एक दशक अघि गायिका बन्नकै लागि काठमाण्डौ आएकी उनले काठमाण्डौ आएर दोहोरी साँझमा काम गर्न थालिन् । दोहोरी साँझमा आधा रातसम्म काम गरेको अनुभव उनीसँग छ ।
गायिका बन्नको लागि काठमाण्डौमा लामो समय संघर्ष गरेकी ज्योतिले राम्रो आवाजबाट भन्दा पनि फिगर शो गरेर चर्चा बटुलिन् । तर उनलाई आफूले गरेका संघर्षमा कसैले ध्यान नदिएको र फिगर शो गरेर मात्रै चर्चामा आई भन्ने गरेका कुराले दुखी बनाउँछ ।
गीत गाउन भन्दा पनि धेरै नाच्न थाल्नु भएछ ?
होईन गीत पनि गाईरहेको छु ।
त्यस्तो राम्रो ‘जिम्मल बाको छोरी’ गीत गाईरहेको मान्छे पछिल्लो समय त ज्योती मगरले हङगामा गरी पो भन्छन् त ? के हो ?
त्यो कुरा सबै त्यसै भएको हो । सबैले मलाई हंगामा गर्लकै रुपमा हेरेको भएर यस्तो भएको होला ।
अब साडी चोलीमा देख्न पाईन्न ज्योती मगरलाई ?
अब देख्न पाउनु हुन्छ । महिलाहरुको महानपर्व तीज आउदै छ नि ।
लोक गायिका भनेको, गुन्यौ चोली, साडी लगाउने आफ्नो संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने जस्तो लाग्छ मलाई तर तपाईले त्यो सोच, त्यो
मानसिकतालाई नै परिर्वतन गर्नुभयो नि ?
समाजको कुनै न कुनै कुरालाई एक व्यक्तिले परिवर्तन गर्नु नै पर्छ र त्यो जरुरी पनि छ । त्यो म आफै हो जस्तो लाग्छ । यसले केही नराम्रो भए पनि केही राम्रो नै भएको छ । धेरै जना गायिकाहरु अहिले आफूलाई सजिलो लाग्ने ड्रेसमा स्टेज कार्यक्रममा जानुहुन्छ । सारीनै बेर्नुपर्छ झन्झट छैन । अहिले मैले देखेको कुरा धेरै जना लोक गायिकाहरु जिन्स, स्कट, गाउन लगायर स्टेज कार्यक्रममा जानुहुन्छ ।
गायिकाले सारी कति बेला लगाउने हो ?
गायिकाहरुले स्टेज कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुती देखाउँदा शर्मिला दिदी, बिमा कुमारी दुराले त स्कट लगाएर हुदैन । उहाँहरुले त दर्शकलाई आफ्नो सुरिलो आवाज सुनाउने हो । त्यो बेलामा साडी र चोलीमा सजिदा नै राम्रो देखिन्छ । तर हामी जस्ता कलाकारले हाऊभाऊ संगै गीत गाउदा सारी अलि असजीलो हुन्छ । डान्सको धेरै स्टेपहरु गर्न मिल्दैन । सारीसंगै अग्लो जुत्ता लगाउनु पर्यो भन्ने गाउन र नाच्न गाह्रो हुन्छ ।
साडी चोली बाहेक अरु लगाउनुको कारण यस्तो पो हो ?
मेरो सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने सजिलोको लागि लगाएको हो । मलाई पाईन्ट पनि मन पर्छ तर मान्छे मोटी भएको कारण म पाईन्ट लगाउँदिन ।
मोटी भएकोमा पीर लाग्छ र ?
मोटो भएकोमा पीर त लाग्दैन । तर अलि पातलो भएको भए राम्री देखिन्थ्यो कि जस्तो चै लाग्छ । हाम्रो आमाहरुको पालामा जो मोटी छ उनै राम्री हुन्थे । तर अहिले त के÷के आयो के÷के । तर सुन्दरताको कुनै पनि क्राईट एरिया छ जस्तो लाग्दैन मलाई । सबै मान्छेमा आफ्नै तरिकाको सुन्दरता हुन्छ ।
अब विश्व सुन्दरीमा पनि हप्सीहरुले भाग लिईरहेका हुन्छन । हामीलाई उनीहरुको ओठनै मन परेको हुन्न तर ब्युटि लिप्स भनेर अवार्ड पाईरहेका हुन्छन् । त्यसैले सुन्दरता नाप्ने यन्त्र छ जस्तो लाग्दैन ।
तर मलाई म आफ्नो नजरमा आफै राम्री छु जस्तो भने लाग्दैन । नाक थेप्चो छ तर पनि मगर्नी हो ठिकै छ भनेर चित्त बुझाउँछु । मोटी, डल्ली छु र पनि खुशी छु । मिल्ने भए हाइट बढाउथे, दुब्लाउँथे आँखा अलि ठूलो बनाउँथे अनि नाक बनाउँथे ।
अनि त्यो हातमा के भएको होनि ?
तरकारी बनाउने बेलामा तेल उछिट्टीएर डामेको हो । मेरो ढंग छैन के ! लामो हाँसो । बाल्यकालदेखिनै बस्ने खाने हिड्ने कुनै पनि कुराको ढङग नभएकै कारण जिउभरी खतहरुछन् । आज भन्दा ७ वर्ष पहिला मलेसियामा स्टेज कार्यक्रममा जाँदा माईकको तारमा हिल जुत्ता अल्झेर लडेको थिएँ म । त्यसबखत म निकै लज्जित भएको थिएँ ।
कहिले काही तपाईको बारेमा अति भन्छन् पनि ?
मैले पनि सुनेको छु । भल्गर, छाडा भन्नुहुन्छ ।
त्यसो भन्दा कस्तो कस्तो लाग्छ ?
मलाई रमाईलो लाग्छ । किन भन्नु भएको हो भन्ने कु्रा पनि मलाई थाहा छ । हाम्रो समाजमा कहिले काहि आफूले गर्न नसकेको काम अरुले गरेको देखेर डाहा हुन्छ । अनि कसरी खोट लगाऊँ कसरी खुट्टा तानऊँ भन्ने हुन्छ । यस्तै सोच हुनेहरुले यस्तो भन्नु भएको हो ।
काठमाण्डौ कहिले आउनु भयो ?
वि.स २०६३ सालमा काठमाण्डौ आएको हो । सुरुमा दोहोरी साँझमा काम गरेँ । अनि असारमा एस.एल.सीको रिजल्ट आए पछि कलेज जोईन गरेँ ।
क्याम्पस पढ्न आउने सरले उता पढाउनी हाम्ले आँखा जुधाउनी भन्ने कुरा भयो कि भएन ?
त्यसैले त छाडेकोनी । (हाँसो) सुन्नुस् मेरो कथा अर्कै छ । यस्तो भयो त्यो बेलामा हामी किशोरावस्थामा थियौँ । विद्यालयमा, घरमा, परिवारको अधिनमा बसेर पढेको मान्छे क्याम्पसमा आए पछि त परिवारबाट पनि टाढा भईने । अनि सबै उस्तै उस्तै साथीहरु भएका कारण बिग्रिने मौका मिल्यो । बिग्रीने भन्दा पनि काठमाण्डौमा एक्लै पनि भएँ अनि पढाई भन्दा गीत संगीतमा ध्यान जान थाल्यो । त्यसै कारणले निरन्तर रुपमा पढ्न पाईन ।
पढाई छाडेर मलाई कुनै पनि पश्चाताप छैन । मैले सोचको काममा अगाडि बढ्न सकेको मा खुशी छु । म त्यती बेला संगीत क्षेत्रमा नलागेको भए चर्चामा आउदिन थिएँ होला । पढाई छाडेरै संगीतमा लागेका कारण यहाँ सम्म आईपुगेको छु ।
सुरुमा मेरो बसाई बल्खुमा थियो । दोहोरी साँझमा बिहानको २ बजेसम्म बस्नुपथ्र्याे । बिहान उठ्न गाह्रो हुन्थ्यो । तै पनि बिहान कलेज जाने, बेलुका दोहोरी साझँ जाने गरेँ तर त्यसलाई निरन्तरता दिन सकिन । अर्को वर्ष कलेज नजिकै कोठा खोजेर बढ्ने सोच बनाएँ । पछि त फेरि पढ्नै मन लागेन । काठमाण्डौमा घरबाट अड्कल गरेर पठाएको पैसाले पुग्दैनथ्यो । त्यहि भएर नै दोहोरी साँझमा काम गर्न सुरु गरेँ । दोहोरी साँझमा बेलुकाको ४ बजे पुग्ने । तयार हुँदा साढे ६ बज्ने अनि ७ बजेदेखि स्टेजमा गाउने क्रम सुरु हुन्थ्यो । साढे १२ त स्टेजमै बज्थ्यो । अनि गाडीको रुट हुन्थ्यो को—को कहाँ बस्ने सबैलाई छोड्दै जाँदा साढे २ बजे घरमा पुगिन्थ्यो ।
काठमाण्डौमा आएपछि आधारात सम्म पनि काम गर्नुभएछ है ?
काठमाण्डौमा बसेपछि हात मुख त जोड्नै पर्यो । सकेसम्म घरबाट पैसा माग्न नपरोस भन्ने मेरो सोचाई थियो । घरबाट अड्कल गरेर दिएको पैसाले पुग्दैन पनि थियो । स्कुल पढ्ने बेलामा पनि जहिले घरमा पैसा मागिरहनु पर्ने हुन्थ्यो । त्यसै कारणले पैसा कमाउने मेरो सोच थियो । मैलै आधा रातको कामलाई पनि सामान्य रुपमा लिए ।
अनि बाबा,आमाले छोरी काठमाण्डौमा एक्लै छ भन्नुहुन्छ की हुन्न ?
पहिला काठमाण्डौमा आउँदा आमाले धेरै पीर गर्नुहुन्थ्यो । अहिले पनि मलाई आमाको कुरा सुन्दा रुन मनलाग्छ ।
म पहिला काठमाण्डौमा एक्लै बस्दा बिरामी भएको थिएँ । त्यो बेलामा ख्याल गर्ने कोही पनि हुनुहुन्न थियो । अनि ग्याँसमा पानी तताएको उठ्न नसकेर पानी भाडामा सुकेर पनि भाँडै डढ्यो । यो कुरा आमालाई सुनाएको थिएँ । अनि मेरो आमाको काठमाण्डौको ठाँउमा एक्लै बस्छे । नराम्रो हुने होकी ! भन्ने कुराले कति वर्षसम्म पनि निन्द्रा नै लागेन । अनि अहिले यस्तो दिन पनि पार गरेको छु मैले भनेर रुन मन लाग्छ । पछि दिदी आउनु भयो । अनि दिदीको छोरा छोरी सबै यतै पढ्न थाले । बिगत ६ वर्ष यता म एक्लै छैन ।
ज्योती मगरको मलेसिया काण्ड एकताका निकै चर्चामा थियो नि ?
म कुनै पनि कार्यक्रममा जाँदा त्यो कार्यक्रम सफल हुन्छ भने मेरो लागि त्यो नै ठूलो कुरा हो । मैले दर्शकहरु पनि टन्नै आउनु भयो भने माग गरे जति पैसा पाउँछु । आयोजक पनि घाटा भएन भने खुशी हुनुहुन्छ । अरुले जे जे भनेपनि कार्यक्रम सफल हुनु नै मेरो लागि ठूलो कुरा हो ।
कलाकार भनेको राष्ट्रको गहना हो मर्यादा पालना गर्नुपर्छ नि ?
कलाकार मात्रै होईन एउटा राष्ट्रको प्रत्येक नागरिक मर्यादामा बस्न जरुरी छ । अरुलाई बारबार पीडा देऊ अनि आफू चाहि भित्र एउटा र बाहिर अर्काे व्यवहार देखाऊ भनेर कुनै पनि किताबमा लेखेको छैन र सिकाईदैन पनि । सबै नागरिकले अरुलाई असर नगर्ने गरि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर भनिएको छ । त्यो कारणले मैले मेरो अधिकार भित्र पर्ने कुराहरु मात्रै गरेको छु । मेरो कुराले दोस्रो व्यक्तिलाई समस्या भएको छैन । मेरो कुरा काट्नेहरुलाई मात्रै समस्या भएको छ ।
कतिवटा गीत गाउनु भयो अहिले सम्म ?
अहिलेसम्म एक सय भन्दा धेरै लोक तथा दोहोरी गीतमा आवाज दिएकी छु । नाटक, सर्ट मुभि, मगर भाषाको चलचित्रमा पनि काग गरेको छु । बाल्यकालमा गाउँमा सडक नाटक पनि देखाईन्थ्यो । मैले पनि त्यसमा काम गरेको छु । म यहाँ सम्म कसरी आईपुगँे भन्ने कुरा भन्दा पनि सबैले छोटो लुगा लगाएको कुरा धेरै गर्नुहुन्छ ।
आफूलाई चिनाउनको लागि पनि छोटो लुगा लगाउनु भएको हो ?
चिनाउनको लागि भन्दा पनि सबैले मलाई छोटो लुगा लगाएपछि बल्ल ध्यान दिनुभयो ।